Ihoyile ye-CBG nge-Trytranquil.net | 2022 Amaxabiso angcono
Yintoni i-CBG Oil Wholesale?
I-CBG iWholesale isebenzisa eyona nkqubo iphambili yenzululwazi ukuvuna i-CBG. I-CBG, eyaziwa ngokuba yi-cannabigerol, yi-cannabinoid eyaziwa kakhulu. I-CBG itsalwa kwizityalo ze-cannabis ngokusebenzisa iziqu zayo, iziqu kunye nembewu. I-CBG yi-acidic precursor molekyuli esetyenziswa sisityalo ukuphula i-THC kunye CBD. Yisandulela, nto leyo ethetha ukuba ayixhaphakanga kwaye ifuna ulwazi oluninzi kunye nokuqonda malunga nekhemistri phambi kokuvuna.
Kutheni iWholeyile ye-CBG yeOli
Sinonxibelelwano oluthe ngqo kubalimi baseColorado kunye neenzululwazi, ngoko sinokubonelela ngomgangatho ophezulu Ubuninzi kunye nehoyile ye-CBG ye-oyile ngamaxabiso afikelelekayo. Ukukhutshwa okusemthethweni kwe-cannabinoid kwizityalo ze-hemp kunokwenzeka. I-Hemp, isityalo esingudade kwi-marijuana, ifumaneka ngokulula kwaye ine-acid yefotochemical efanayo evelisa uluhlu olubanzi lwe-cannabinoids. Isityalo se-hemp sibiliswa kancinci nge-organic (esekelwe ekutyeni) ethylalcool. Isityalo se-hemp siyashukunyiswa ngobunono ukukhuthaza intshukumo yemolekyuli kunye nokukhuhlana kwendalo ngeli thumba liphantsi lobushushu. Oku kudala umphunga othi emva koko ukhanye kwaye uguqulelwe kwikhompawundi oyifunayo, i-cannabinoid.
Ukuhanjiswa kobungakanani obuguquguqukayo
Naliphi na inani le-CBG linokugcinwa kwiziko lethu lokukhula. Siza kugcwalisa nayiphi na iodolo kwaye sihambe naluphi na ubude ukufumana imveliso yakho kuwe.
Owona Mgangatho ugqwesileyo
Zonke iimveliso ziveliswa kwiDenver Environmental Health Compliant Facilities. Sithobela yonke imithetho ebekwe yimeko-bume, iMpilo kunye nemigaqo yoKhuseleko ukuze sinikezele ngeyona nkqubo ilungileyo yokutsalwa kwe-hemp.
IiTinctures ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso
Sinikeza uluhlu lweedosi ze-CBC, ukusuka kwi-500mg ukuya kwi-3000mg. IiTinctures zethu zinokulungiswa ngombala kunye neelebhile.
IWholeyile yeOli ye-CBG ibonelela ngeSongezo soNyango
Iziko leSizwe lezeMpilo libonise ukuba i-CBG kunye neentsapho zayo ze-cannabinoid zibonakaliswe ukunciphisa uxinzelelo, ixhala kunye nokudakumba. Izifundo ezininzi zibonise ukuba intsangu yonyango inezibonelelo ezininzi zempilo. I-CBG ibonakaliswe kwizifundo zokunciphisa iimpawu zeglaucoma kunye nokuphucula uxinzelelo lwamehlo ( umthombo). Funda ngakumbi malunga neenzuzo zempilo ezinokuthi zenzeke kwi-CBG, kubandakanywa namaphepha angama-50+ achazwe kwaye akhankanywe kwizifundo zonyango.
Ulawulo lomlomo lweoyile ye-cannabinoid ibonise ukubonelela ngolungelelwaniso olukhulu phakathi kokukhululeka ngokukhawuleza kunye nokukhululeka okuhlala ixesha elide kwixhala kunye neentlungu. Ngenxa yokuba idityaniswe ne-mct coconut oils, i-oyile yethu yonke-organic iqulethe iikhompawundi ezininzi ezigqwesileyo ezifana ne-terpenes kunye ne-omega-3 fatty acid, i-amino acids, i-chlorophyll kunye neevithamini. Zonke iimveliso ziveliswa kwi-Denver Environmental Health Compliance Facility. Sithobela yonke imithetho ebekwe yimeko-bume, iMpilo kunye nemigaqo yoKhuseleko. Oku kusivumela ukuba sinikezele ngeyona nkqubo iphezulu yokutsalwa kwe-hemp kwaye siqinisekise ukuba indawo yethu iyahambelana neMpilo yokuSingqongileyo.
Ukuthunyelwa kwe-cbg kwi-wholesale kumazwe e-forgein
I-Trytranquil.net ihambisa i-bulk & wholesale CBG, CBD & Delta 8 THC Oils kumazwe amaninzi angaphandle, kuquka iJamani, i-Israel, iRashiya, iCroatia, iFransi, iGrisi, iHungary, iMexico, kunye nokunye! Qhagamshelana nabamele ukuthengisa namhlanje ngexabiso lemveliso kunye neshedyuli yokuthumela.
Indawo yokugcina iOyile ye-CBG
Sinesitokhwe kwiWarehouse yethu kwaye sinokusebenza nasiphi na isixa seoli ye-CBG ngenxa yokuba yinkampani esekiweyo enabathengi abaphindayo. Joyina usapho lwethu lwabathengi kwaye ufumanise izibonelelo zokuxhaswa kwe-CBG zokuphumla kunye nokuba sempilweni.
Cofa Apha Ukuodola i-CBG Wholesale